बहुविवाह गर्दा पनि जागिर नजाने ! - Everest Dainik - News from Nepal
बहुविवाह गर्दा पनि जागिर नजाने !
काठमाडौं, भदौ १८ । सरकारले झन्डै एक बर्ष लगाएर संघीय निजामति सेवासम्बन्धी विधेयक बनायो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो गृहकार्यपछि बनाएको विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठायो पनि । मन्त्रिपरिषदमा पठाउँदा एउटा प्रावधान भने चलाखीपूर्ण रुपमा हटाइयो, त्यो हो बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधान ।
मन्त्रिपरिषदमा पठाउनु अघिसम्म प्रस्तावित विधेयककमो सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था, समेटिएको दफामा यस्तो व्यवस्था थियो, बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त आयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ । आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।
तर मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको विधेयकमा बहुबिबाहसम्बन्धी प्रावधान एकाएक हटाइएको छ । बहुविवाह गर्ने कर्मचारी बर्खास्त हुने प्रावधान हटाएर संघीय नेपालका कर्मचारीलार्य खुलेआमा बहुविवाहको स्वीकृति दिन खोजिएको हो ?
याे पनि पढ्नुस कांग्रेसबाट विजयी गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध जेठी श्रीमतीद्वारा बहुविवाहको मुद्दा दायर
ट्याग्स: Dubal marriage, बहुविवाह